Ny Solar Solve dia afaka manolotra sarimihetsika varavarankelin'ny varavarankely ho an'ny fitaratra vera na lehibe na azo atolotra amin'ny horonan-tsary.
Sarin'ny sary mihetsika an'ny Window Solve an'ny Solar Solve:
Tsy ny filma rehetra no mety amin'ny gila rehetra. Ny fanodinana ny fitaratra sy ny sarimihetsika, ny haben'ny palma, ny hatevin'ny glasa ary ny fanorenana ny varavarankely dia tokony hodinihina amin'ny endriky ny singa tokana, ny fitaratra voapetaka, ny fitsaboana (miaraka amin'ny famerenan-keloka ambany), laminated na toughened.
Ny torohevitra momba ny fifantenana ny sarimihetsika ho an'ny fitaratra dia tena ilaina mba tsy hahatonga ilay fitaratra tsy hikorontana vokatry ny adin-tsaina mivaingana. Na izany aza, azo atao ny manasaraka ny fitaratra amin'ny manaraka ny fampiharana sarimihetsika mifanaraka amin'izany, satria efa simba ny sisin'ny fitaratra nandritra ny famaranana ny varavarankely, na vokatry ny fihetsik'ilay trano na ny adin-tsaina hafa tsy hita amin'ny fotoan'ny fampiharana sarimihetsika.
Ny fielin'ny fipoahan'ny glaso dia miteraka kely amin'ny fampiharana ny sarimihetsika. Na dia izany aza dia mety hitranga ny fako ary tsy azo atao ny maminavina ny toetry ny sisin'ny vera tsy ahafahana manala azy amin'ny endrika - fomba iray tsy dia mahazatra.
Tsy maintsy ampiharina amin'ny fitaratra fisaka fotsiny ny sarimihetsika fenitra. Tsy tokony hampiharina amin'ny polycarbonate (plastika) izy io. Tsy tadidintsika fa ny sarimihetsika varavarankaratra (metimety) dia ampiharina amin'ny vera, vera roa na glazed, na glace tena tsara rehefa mety hitrangan'ny hafanana.
Inona ny sarimihetsika adhesive window?
Ny filaharan'ny varavarankely dia vita avy amin'ny plastika mikirindro kely. Izy ireo koa dia manana fiakarana maimai-poana (SR) mba hiarovana ny sarimihetsika sarimihetsika ary hampitombo ny faharetana (afa-tsy ny filma amin'ny fampiharana ivelany).
Ny ankamaroan'ny sarimihetsika dia apetaka amin'ny atin'ny varavarankely fitaratra ao anaty trano, tranom-barotra na fiara. Izy ireo dia manana fonosana azo tohina amin'ny endrika ivelany mba hiarovana ny sarimihetsika. Ny sarimihetsika varavarankely dia natao manokana hiarovana ny varavarankely amin'ny hafanana ateraky ny tara-masoandro, ary koa ny jiro IR sy UV. Mba hanaovana izany, ny loko sy ny metaly dia apetraka eo anelanelan'ny soson'ny sarimihetsika polyester izay mifamatotra. Ny karazany, ny habetsany ary ny kalitaon'ny loko sy ny metaly ampiasaina amin'ny fizotry ny famokarana dia mamaritra ny kalitao, ny faharetan'ny alokaloka, ny lokony, ny fitrohana ny hafanana, ny taratra UV, ny fiarovana, sns ny vokatra vita.
Inona avy ireo tombontsoa azo avy amin'ny sarimihetsika Window?
Ny sarimihetsika Window dia manana tombony maro miankina amin'ny safidy noforonina:
• Famerana ny fampiasana hafanana sy ny hafanana amin'ny masoandro ao anaty trano, sambo, sns.
• Ampiheno ny fandaniana amin'ny toetr'andro
• Manaparitaka ny fiainan'ny rafitra HVAC amin'ny alalan'ny fampihenana ny fikojakojana sy ny fifehezana ny rafitra
• Fanimbana ny famoahana ny tontolo iainana
• Ampitomboina ny fampiononana ao an-tokantrano
• Mampihena ny famirapiratana hanatsarana ny fahitana ao anatiny, indrindra ho an'ny efijery amin'ny ordinatera sy ny VDUs
• Mametraha fiainana manokana mandritra ny andro
• Mitandrema amin'ny 99% amin'ny taratra UV
• Manome fiarovana lehibe ho an'ny fiarovana mozika, karipetra, kitay hazo sns
• Hanatsara ny fanorenana trano fisainana sy ny varavarankely
Ny sarimihetsika vita amin'ny metaly dia manome fifehezana masoandro be dia be satria taratra taratra taratra masoandro maro be izany. Izy ireo dia mahazo ny anarany avy amin'ny sosona vy manify indrindra ao anatin'ny horonantsary, matetika ny aliminioma. Ireo horonantsary ireo dia natao tamin'ny alàlan'ny fantsom-bovoka izay nanisy sosona vy tamin'ny polyester, avy eo nopetahany laminate mazava mba hiarovana ny vy. Ireo dia avy eo ampandalovina eo anelanelan'ny sosona adhesive. Asiana UV inhibitor sy sarisary mahatohitra fihomboana. Ny alokalony sy ny lokony dia mamaritra indrindra amin'ny karazana vy ampiasaina hanamboarana azy.
Ny horonan-tsofin'ny varavarankely mihaja dia mampiseho hazavana bebe kokoa noho ny fandraisany sy ny fiasan'izy ireo amin'ny 'fiainana an-tsenan'ny fiainana an-davan'andro'. Ny fahitana ny sarimihetsika dia mahomby amin'ny alàlan'ny "ambany ambany" eo amin'ilay sarimihetsika. Midika izany, rehefa ampiharina amin'ireo varavarankely manoloana ny olona ireo sarimihetsika ireo dia afaka mijery ivelan'ny efitrano mandritra ny ora maoderina, fa ny olona dia tsy afaka mahita anaty mora. Na izany aza, dia niverin-dàlana tamin'ny alina ny toe-draharaha. Ny 'fitaratra fitaratra' dia mitranga rehefa mijery ny varavarankely ka mora kokoa ny mijery ao an-efitrano fa tsy avy ao anatiny, ka raha maivana ny ao anatiny ary maizina ny ivelany, dia very ny endri-tsoratry ny sarimihetsika. Ireo horonantsary ireo dia afaka manome ny fiainana manokana amin'ny alina arakaraka ny fandaminana ny tariby ao anatin'ny trano, fa raha te hahalala ny fiainana privé 100 ianao dia mbola takiana ny jambes na ny curtain.
Ny sarimihetsika mandinika dia manome endrika metaly mamirapiratra ho an'ny ivelan'ny tranobe. Ity dia mety ho endrika manintona rehefa ampiarahina amin'ny maritrano maoderina fa tsy ho an'ny tsiron'ny tsirairay ary mety ho olana ny famirapiratra / famirapiratana hita taratra. Ny horonantsary misaintsaina dia mety hiteraka fanelingelenana amin'ny radio, GPS ary telefaona finday ihany koa.
Ny sarimihetsika mirindra dia safidy tsara raha ny fanaraha-maso ny masoandro no fiheverana mibaribary any amin'ny toetrandro mafana, ary ny olona ao anaty dia tsy misaina ireo fisaintsainana kely atrehanao amin'ny alina.
Sarimihetsika tsy mipoitra na loko
Na dia tsy taratra aza izy ireo satria tsy mampiditra metaly misy azy ireo, ireo sarimihetsika ireo dia manome fifehezana hafanana sy famirapiratana amin'ny alàlan'ny fifohana ny masoandro. Ny sarimihetsika nolokoana dia misy loko isan-karazany ary mazàna amboarina amin'ny alàlan'ny fandokoana loko amin'ny sarimihetsika polyester base miaraka amin'ny inhibitor UV. Misy tombony maro azo avy amin'ny vokatra mifandraika amin'ny sarimihetsika miloko. Manome kalitao optika sy mazava kokoa izy ireo amin'ny alàlan'ny fanaraha-maso manjelanjelatra ary, mitovy ny zava-drehetra, fohy kokoa ny fotoana maina noho ny amin'ny sarimihetsika misy sosona vy. Zava-dehibe ny manamarika fa ny sarimihetsika nolokoana dia tsy mandaitra loatra amin'ny fifehezana ny fahazoana hafanana avy amin'ny masoandro satria mifehy ny hafanana amin'ny alàlan'ny fifohana ny angovo avy amin'ny masoandro. Ny hafanana entin'ny horonantsary dia nafindra tao amin'ny vera, avy eo niparitaka ivelany tamin'ny fihetsiky ny rivotra. Ny sarimihetsika metaly dia taratry ny angovo avy amin'ny masoandro, ka mahomby kokoa izy ireo. Ny sarimihetsika tsy misy taratra dia mandoko ny vera miaraka amina famaranana ambany izay midika fa tsy misy fisehoana taratra avy any ivelany. Ny fandanjalanjan'ny hazavana dia miankina amin'ny fahitanao ny sarimihetsika amin'ny lafiny roa. Tints tena maizina dia mahatonga ny sarimihetsika ho sarotra jerena kokoa.
Fanondrahana na 'manasitrana' fotoana
Ny fahombiazan'ny sarimihetsika varavarankely dia tsy mandaitra avy hatrany. Ny vanim-potoana 'manasitrana' dia tokony avela haharitra hatramin'ny 30 andro aorian'ny fametrahana azy rehefa manjavona ny vahaolana fampiharana eo anelanelan'ny sarimihetsika sy vera. Mandritra io vanim-potoana io dia mbola manatanteraka ny fifehezana ny masoandro sy ny fahafahany miaro ny masoandro ilay sarimihetsika. Rehefa manomboka ritra ilay sarimihetsika dia mahazatra ny mahita miboiboika, setroka, tadiny, ary lesoka hafa hita maso amin'ilay sarimihetsika rehefa manasitrana izy. Ara-dalàna tanteraka izany, ary hanjavona ireo rehefa maina ilay horonan-tsary.
Ny famotopotorana ataon'ny firoboroboana dia tena ilaina mba hampihenana na hampihenana ny vokatra "mampivandravandra" vokatry ny fanamafisana ny rano mandritra ny sehatra 'fanasitranana'. Raha mitranga ny rahona dia tokony andro vitsy monja no hazava tanteraka. Ny fepetra takiana kosa dia tokony ho ampy, anisan'izany ny hafanana sy ny rivotra, raha tsy izany dia mety hijanona mandritra ny fotoana lava be ny rahona.
Ny 'tsipika fahazavana' dia banga tavela manodidina ny sisin'ny sarimihetsika varavarankely (eo ho eo. 2 - 3mm) aorian'ny fampiharana amin'ny vera. Izy io dia miantoka fa ny vahaolana ampiasaina amin'ny fampiharana ilay horonantsary dia azo esorina mora kokoa rehefa 'mikiakioka', ary ialàna ny mety hisian'ny rano sy ireo poti-tany miantona mihetsika eo ambanin'ny sarimihetsika amin'ny alàlan'ny hetsika capillary. Izy io koa dia miantoka fa ny sarimihetsika napetraka dia tsy mikasika ny sisin'ny endriny izay mety hitarika amin'ny fanongotana sy ny fikolokoloana ny sarimihetsika.
Ara-dalàna ny velaran-drano kely eo anelanelan'ny sarimihetsika sy ny vera. Manodidina ny 10 - 15% ny hamandoana mijanona eo anelanelan'ny vera sy ny sarimihetsika avy hatrany aorian'ny fametrahana azy. Ity hamandoana ity dia hanjavona amin'ny alàlan'ny famolavolana satria lava ny sary. Ny bubble izay tsy manjavona dia azo esorina amin'ny alàlan'ny fanjaitra amin'ny fanjaitra maranitra na antsy maranitra.
Ny 'Inclusions' dia vovoka kely voadaroka eo amin'ilay sarimihetsika sy ny fitaratra ary tokony hesorina amin'ny famafàna ny sarimihetsika avy amin'ny fitaratra ary mivoaka amin'ny rano, alohan'ny hanombohan'ny adhesive hampiharina.
Ny horonan-tsarimihetsika amin'ny varavarankely dia manivana mihoatra ny 99% ny taratra UV, mampihena ny antony lehibe mahatonga ny fahalavoana. Na izany aza, ny anton-javatra fanampiny toy ny hafanan'ny masoandro, ny hazavana hita, ny hamandoana, ary ny fisian na tsy fisian'ny etona simika dia manampy amin'ny fahaverezana ihany koa. Noho izany, ny fiarovana lehibe indrindra amin'ny fanjavona dia atolotry ny sarimihetsika amin'ny varavarankely miloko na metaly izay mandà ny hafanana sy hazavana hita maso, ankoatry ny UV.
Fanomanana / fanadiovana
Ny fizotry ny fanadiovana ny varavarankely misy sary dia mitovy amin'ny vera mbola tsy namboarina. Alohan'ny hanadiovana dia alao antoka fa efa sitrana tanteraka ilay sarimihetsika. Manoro hevitra anao izahay ny hiandry 30 andro alohan'ny hanadiovana aorian'ny fametrahana ny horonantsary. Mampiasà lamba malemilemy, servieta vita amin'ny taratasy malefaka na spaonjy sentetika madio izay TSY marokoroko. Rano savony na vahaolana fanadiovana fitaratra mahazatra izay tsy misy abrasives no tsara ampiasaina. Maina miaraka amin'ny lamba madio malefaka.
Ny horonan-tsarimihetsika rehetra dia rakotra 5 herintaona vita amin'ny famokarana fanoherana, fikapohana, famonoana ary fanesorana.
Fitaovana fanontam-pirinty fanindroany